Xog Xasaasi ah: Farmaajo iyo Rooble oo Ku Sigtay In Geddisleyda Shidaalka Fara Madoobeyaan Dalka | Allbanaadir.com
Home NEWS Xog Xasaasi ah: Farmaajo iyo Rooble oo Ku Sigtay In Geddisleyda Shidaalka...
Warar laga soo xigtay Guddiga Maamulka Maaliyadda (Financial Governance Committee) oo la soo dhigay baraha twitter-ka ayaa sheegaya in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay malaha ku degdegta inay gorgortan toos ah gasho iyadoo aysan u dhammeystirnayn hawlahii saldhigga u ahaan lahaa qanadaraas bixinta. Taas ayaa malaha keentay in Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ka fogaadaan saxiixa hawl ay dhici karto inay dhaliso sheegashooyin sharci amase magdhow.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira khatar la xiriirta siinta shirkadaha loo yaqaano gaddisleyda (asset flippers) xuquuq baaris shidaal: (1) Looma hoggaansamayo qaab-dhismeedka sharciga shidaalka dalka, taas oo dhilin karto dacwado maaro loo waayo oo xayira ka faa’iideysiga khayraadka dalka; (2) Lama ilaalin karo danaha dhaqaalaha dalka amase dalku ma heli karo saami caddaalad ah, marka loo eego waxa ay bixiyaan shirkadaha calamiga ah ee meelo kale ka hawlgala; iyo (3) Shirkadda geddisleyda ah ee weliba leh khibradda iyo awood waxay raadiyaan bar macaan (sweet spot), kaddibna waxay xuquuqda barista ka iibiyaan (asset flippers) shirkaddo aan tixgelin siin doonin baahida dalka.
Ma muuqato in shirkadaha Liberty Petroleum iyo Coastline Petroleum ay u diyaarsan yihiin wax soo saar dhaqaale mug leh iyo khibrad hawleed u baahan. Badanaa shirkadaha gedisleyda ah waxay ku andacoodaan waxyaabo macquul ah oo gacan ka geysanaya dib-u-dhaca ka faa’iideysiga kayraadka dalka sida: Hubin la’aanta keydka shidaalka dhul-badeedka hoostiisa, kharashyada sahminta oo sarreeysa, sicirka badeecada oo isa soo tari waaya, iwm.
Inta kale haddii loo dulqaato, waxaa khatar muuqan ah in xuquuqda shidaal barista dalka ay shirkadaha gedisleyda ah ka iibiyaan shirkado nibiri ah (hantida badan) oo dantoodu tahay inay keysi dhaqaale u heystaan ilaa faa’iidadoodu kobocdo. Khatarta intaas kuma eka, waxaa afka loogu dhaci karaa shirkadaha Aramco, Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC, amase Emirates National Oil Company – ENOC iwm., oo ay dhici karto inay dano siyaasadeed oo dahsoon ka leeyihiin xannibaadda khayraadka Soomaaliya.
Previous articleHaween garsoore ka ahaa Maxkamad sare oo saakay toogasho lagu dilay (Sawirro)
Next articleMiinooyin la sheegay in laga keenay Eritrea oo Muqdisho laga soo dejiyay iyo cida lala beegsanayo oo …